geospatial - GIS - Page 5 - Geofumadas
Nidaamka Macluumaadka Juqraafi: videos 30
Gobokogal aan qarsoodi ahayn oo ku dhow waxkasta oo aan sameyno, iyada oo la adeegsanayo qalab elektaroonik ah, ayaa ka dhigay arin GIS oo sii kordheysa si degdeg ah u dalbato. 30 sano ka hor, oo ka hadlaya isku-duwid, jidka ama khariidadu waxay ahayd arrin xasaasi ah. Isticmaalay oo keliya khabiirada kartida ama dalxiisayaasha aan samayn karin iyada oo aan ...
Maxaa ku dhacay Twitterka Top40 ee Geospatial Geoffatial
Lix bilood ka hor ayaan dib u eegney qiyaastii afartan twitter twitter, liis ay ku jiraan liiska aan ugu yeerno Top40. Maanta waxaannu cusboonaysiinnaa liiskan liiskan, si loo arko wixii dhacay intii u dhaxaysay May 22 iyo dhammaadka Diisambar 22 ee 2014. Dhammaan, 11 waxay ku qoran yihiin Ingiriis, laba af Portuguese iyo inta kale ...
data bandhigay QGIS ee Google Earth
GEarthView waa miisaan lagama maarmaan ah oo kuu ogolaanaya inaad samayso aragti la isku duubo oo ku saabsan soo dejinta Quantum GIS ee Google Earth. Sida loo rakibo fiilada Si aad u rakibto, waa inaad doorataa: Ku-dariiqooyin> Maaree ku-lifaaqyada oo raadi, sida ku cad muuqaalka. Marka fiilada la rakibo, waxaa lagu arki karaa qalabkan ...
Isticmaalka GIS si loo xakameeyo oo looga hortago dengue
Maaddada Mesoamerican iyo tropic caalamka guud ahaan, Dengue waa cudur caadi ah xilliga roobka. Ogaanshaha meesha tirada ugu badan ee dhacdooyinka ay dhacayaan waa hubaal ah jimicsiga codsiyada GIS ay bixiyaan natiijooyin qiimo leh. Waxaan xasuustaa markii aan ahaa ilmo, dengue ma ahayn ...
Isticmaalka qawaaniinta saadaaliga ah ee ku yaalla xaaladaha geospatial
Mid ka mid ah weedhaha 6 2014 Cadastral, sara 1995, oo khubaro badan oo xiriirka caalamiga ee Sahmiyayaasha rogeen sida uu noqon doono Cadastre ee sanadka soo 2014, waxay ahayd: "khariidaynta Cadastral The qayb ka mid ah la soo dhaafay uu noqon doono. Qaabaynta sii wadi doonaa. " Uruurinta waa anshax aad u jir ah, oo mar kasta waxay leedahay ...
XVI Congress of Technological Information Technologies
Maanta oo keliya, 25 ee June ee 2014 iyo ilaa 27 lagu dabaaldegi doono Jaamacadda Alicante XVI Congress National Technologies of Information Geogorafica. Munaasabadan waxaa lagu abaabulay qaabka Kooxda Shaqada ee Technological Information Technologies ee Ururka Iskeeliyeyaasha Isbaanishka (AGE), iyada oo ujeedadu tahay ...
Twitter ayaa bedelay badan oo wadada ku sameyn jirnay iyada oo quudintooda dhaqanka. Waa su'aal sababta ay tani u dhacday, laakiin waxaa laga yaabaa hal sabab oo waa ku oolnimada of news jabiyay ka mobile iyo awood u leh inay kala shaandhayso liiska iska dhigay content ka baxsan our xiiso. In ...
Just ku nahay markaannu waqti marka ay su'aal baaxadda dhabta ah ee iskaashiga caalamiga ah ee horumarinta iyo dadaalka dal kasta si aad u dalbato ay qorsheyneysa ujeedadu of wanaajinta tayada nolosha muwaadiniinta, yimaado edition labaad, taas oo ka mid ah a codsiyada Maps daabacaadan CD ...
Tiknoolajiyada tiknoolajiyada ee kaabayaasha xogta ee ka jira Latin America
Under mashruuca la hay'adaha IPGH 3 Dalalka Latin America (Ecuador, Colombia iyo Uruguay) waxaa ka shaqeeya mashruuca "Dhacdo lafo-isbedelka cusub ee astaanta kaabayaasha dhaqaalaha Data ee Latin America, caqabadaha iyo fursadaha". Macnaha halkan waxaan ku yeedhi inaad ka qayb sahan this sidoo kale caawimo si ay u daabacaan oo qaybiyaan ...
Geospatial - GIS, dhowr
Wac adeegyada WMS ee Microstation
Waxaa la og yahay sida adeegyada adeegyada Web daabulka ciidamadeeda map in Raster khariidaynta dulinka ama internetka ama aabooyinka u adeegeen isticmaalaya Heerka WMS u dallacsiiyey by TC211 Guddiga Nice halkaas, Open Geospatial Consortium. Qeybta hoose, waxa ay ka dhigeysaa adeegyada waa in la geeyo sida image ah mid ama ka badan layers la symbology iyo hufnaan ...
OpenGeo Suite: Tusaale weyn oo ah GIS Software oo ku fekeraya daciifnimada qaabka OSGeo
Maanta, ugu yaraan jawiga juquraafiyadeed, xirfadle kasta oo fekerka dhexdhexaad ah wuxuu aqoonsan yahay in software furan oo furan uu yahay mid caqligal ah sida software ganacsi, iyo siyaabaha qaar ka sarreeya. Istaraatiijiyadaha heerarka sare waxay si fiican u shaqeynayeen. Inkasta oo ay isbeddelka u dhiganta ee casriga ahi waa su'aal ka hor inta aaney tamarta u baahnayn ...
Xawilaadaha internetka ee bilaashka ah ee macluumaadka GIS - CAD iyo Raster
MyGeodata Converter waa adeeg Internet ah in uu fududeeyaa beddelidda ee xogta u dhexeeya qaabab kala duwan. Waayo, hadda adeegga aqoonsan 22 qaabab dulinka talooyin: ESRI Shapefile Arc / Info Binary Caymiska Arc / Info .E00 (ASCII) Microstation Caymiska DGN File (7 Version) MapInfo hakad Kala Value (.csv) GML GPX KML GeoJSON UK .NTF SDTS US Census ...
Saadaasha 2014 ee macnaha geofumado: Paul Ramsey
Laga bilaabo Jannaayo, Paul Ramsey wuxuu billaabay saadaashiisa sanadkaan ee goobaha juqraafi ah; iyada oo la tixgelinayo in tani ay tahay qof ku dhex nool degaankan in ka badan sanado 10 iyo, kuwaas oo ka dhashay faa'idadoodii ay ku heleen software-keeda, waxay heleen abaalmarinta Sol Katz ee 2008 ee bixisa ...
Waxaa loo yaqaan LADM habraaca maamulka dhulka (Land Management Domain Model), kaas oo u suurtagashay inuu noqdo ISO 19152 oo ka socda 2012. Ma aha software, laakiin waa qaab fikradeed oo muujinaya xidhiidhka u dhexeeya dadka iyo dhulka; Qiyaasida waxa u muuqda waddan kasta wuu ka duwan yahay waana ...
MappingGIS, marka laga reebo inoo soo bandhigo blogka xiisaha leh, wuxuu xooga saaraa qaabka ganacsiga ee ku saabsan bixinta tababbarka online-ka ah mawduucyada xaaladaha geospatial. Kaliya 2013, in ka badan ardayda 225 waxay qaateen koorasyadooda, qaddar ay u muuqdaan kuwo la taaban karo, iyaga oo tixgelinaya in dadaalku uu ku jiro laba ganacsade oo bilaabay wax yar ...
ArcGIS-ESRI, Baridda CAD / GIS, Geospatial - GIS, qgis, dhowr
Boggii hore Page 1 ... Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 ... Page 19 page Next